तालिवानविरुद्ध लड्न अफगानिस्तानको पञ्जशीरमा हजारौ लडाकुहरु जम्मा, अब के होला ? « News24 : Premium News Channel
तालिवानविरुद्ध लड्न अफगानिस्तानको पञ्जशीरमा हजारौ लडाकुहरु जम्मा, अब के होला ?
काठमाडौं । अफगानिस्तानको राजधानी काबुलबाट करिब ३० माईल टाढा रहेको एउटा दुर्गम उपत्यकामा तालिवानविरुद्ध लड्न हजारौं तालिवान विरोधी लडाकुहरु जम्मा भएका छन् ।
यो देशको हालको अशान्त इतिहासमा पहिलो पटक हो कि नाटकीय र प्रभावशाली पञ्जशीर उपत्यका एक आशाको केन्द्रको रूपमा उभिएको छ। यो सन् १९८० को दशकमा सोभियत सेना र ९० को दशकमा तालिवानविरूद्ध विपक्षीहरुको गढ थियो । त्यहाँ उपस्थित अफगानिस्तानको राष्ट्रिय प्रतिरोध मोर्चा –एनआरएफ० फेरि संसारलाई यो उपत्यकाको शक्ति सम्झाएको छ। एनआरएफका विदेश मामिला प्रमुख अली नजारीले बीबीसीलाई भने, उनीहरुको बलको बावजुद रुसी रेड आर्मी हामीलाई पराजित गर्न असमर्थ भएको छ, र २५ वर्ष पहिले तालिवानले पनि। उनीहरु सबैले उपत्यका कब्जा गर्ने प्रयास गरे तर असफल रहे।
लामो, गहिरो र धुलोयुक्त उपत्यका राजधानी काबुलको उत्तर, दक्षिणपश्चिम देखि पूर्वोत्तरसम्म लगभग ७५ माईल –१२० किमी० सम्म फैलिएको छ। यसको वरिपरि भुइँदेखि माथि ९८०० फिट (३,००० मिटर) को पहाडहरुको शिखरहरु छन्। यी पहाडहरु त्यहाँ बस्ने मानिसहरुको लागि एक प्राकृतिक सुरक्षात्मक ढालको रूपमा कार्य गर्दछ।
तालिवानको कब्जा हुनुभन्दा पहिले अफगानिस्तानमा बस्ने साकिब शरीफीले आफ्नो बचपन पञ्जशीर उपत्यकामा बिताएका थिए। पूरै क्षेत्र यसको एक पौराणिक पक्ष हो। यो केवल एक उपत्यका हैन। जब तपाइँ यसमा प्रवेश गर्नुहुन्छ, त्यहाँ कम्तिमा २१ वटा उप घाटीहरु एक अर्कासंग जोडिएका छन्, उनी बताउँछन्।
इतिहासमा, पञ्जशीर उपत्यका आफ्नो अर्ध बहुमूल्य रत्नको लागि पनि परिचित थियो । लीड्स विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय इतिहासको एसोसिएट प्रोफेसर एलिजाबेथ लीक भन्छन्।
अहिले पञ्जशीर उपत्यकामा हाइड्रोइलेक्ट्रिक बाँध र एक पवन फार्म छन्। अमेरिकाले काबुलबाट सिग्नल प्राप्त गर्नको लागि यसको सडकहरुमा एक रेडियो टावर बनाउनमा मद्दत गर्यो। सन् १९५० को दशकमा सोभियत रूसले बनाएको बग्रामको पूर्व अमेरिकी एयरबेस घाटीको मुखबाट अलि टाढा छ।
पञ्जशीरको बहादुर सेनानीहरु
पञ्जशीर उपत्यकामा अनुमानित १.५ देखि २ लाख मानिस बस्छन्। त्यहाँका अधिकांश मानिसहरु ९दारी० भाषा बोल्छन्। ताजिक मूलको यो भाषा अफगानिस्तानको मुख्य भाषाहरु मध्ये एक हो।
देशको ३.८ करोड जनसंख्याको एक चौथाई हिस्सा ताजिकहरुको हो। जे होस्, पञ्जशिरी ताजिकिस्तान, अफगानिस्तानको उत्तरी छिमेकी मध्ये एक देखिदैन। बरु उनीहरुको आफ्नै स्थानीय पहिचान छ।
साकिब शरीफी, जो हालसम्म अफगानिस्तान कृषि मंत्रालयमा योजना महानिर्देशक थिए, पञ्जशिरियो बहादुरको रूपमा वर्णन गर्दछ।
उनी भन्छन्, ‘उनीहरु शायद अफगानिस्तानका सबैभन्दा साहसी मानिसहरु हुन्। स्थानीयहरु तालिवानसंग असहज छन् र –एक सकारात्मक आक्रामकता० छ। बेलायत, सोभियत संघ र तालिवानविरुद्ध ऐतिहासिक जीतले जनतालाई अझ उत्साहित बनाएको छ।’
‘सन २००१ मा तालिवानको पराजयपछि पञ्जशीर उपत्यका एक जिल्लाबाट एक प्रान्तको रुपमा स्थापित भयो। यो अफगानिस्तानको सबैभन्दा सानो प्रान्तहरु मध्ये एक हो। यो एक प्रान्त बनाउने निर्णय विवादास्पद थियो, डा एन्टोनियो गिउस्टोज रोयल संयुक्त सेवा संस्थान (आरयूएसआई) का’ एक वरिष्ठ भन्छन्।
उनी भन्छन् कि २००० को शुरुमा पञ्जशिरि लडाकुहरुसंग धेरै शक्ति थियो। उनले काबुल कब्जामा सहयोग गरेका थिए र त्यसपछि नम्बर एक हितधारकु बने। पञ्जशिरी नेताहरुलाई सरकार र सेनामा प्रमुख पदहरु दिइयो। उपत्यकालाई स्वायत्तता दिइएको थियो। यो देशमा एक मात्र प्रान्त थियो जहाँ यसको गभर्नर बनाइयो, जबकि अन्य प्रान्तहरुमा, स्थानीय मानिसहरुलाई गभर्नर बनाउन सकिएन।’
‘गभर्नरहरु सामान्यतया स्थानीय जनसंख्याको तुलनामा सरकार प्रति अधिक वफादार हुने अपेक्षा गरिन्छ’ डा.गिउस्टोजी भन्छन्।
रणनीतिक महत्वपूर्ण क्षेत्र
डा गिउस्तोजीको अनुसार, अफगानिस्तान मा शायद सयौं त्यस्ता घाटीहरु छन्। तर यो उपत्यका काबुलबाट उत्तर जाने मुख्य सडकको नजिक छ। यसले यसलाई विशाल रणनीतिक महत्वुको उपत्यका बनाउँछ।
यस उपत्यकाको प्रवेशद्वार बिन्दुबाट टाढा छैन जहाँ काबुलबाट मुख्य राजमार्ग मैदान छोडेर पहाडहरुमा उचाईमा सलंग पास तिर जान्छ। सालालन पास एक सुरंग हो जुन कुन्दुज र मजारएशरीफको उत्तरी शहर को लागि अग्रणी छ।
शरीफी बताउँछन् , पञ्जशीर धेरै शक्तिशाली कारकहरुको संयोजनको कारण महत्वपूर्ण बन्छ। उनका अनुसार, यसको महत्व मात्र हैन त्यहाँ टाढाबाट अगाडि लिनको लागि दर्जन स्थानहरु छन् न त यसको पहाडी भूभागको कारण।यो पञ्जशीर बासिन्दाहरुको गौरवको कारणले पनि हैन। यसको महत्व यी सबै कारकहरुको संयोजन द्वारा बनाइएको हो।
पछिल्लो गतिरोधको समयमा, यो मानिन्छ कि यस घाटीमा हतियार को एक ठूलो भण्डार छ। २० वर्ष पहिले तालिवान पछि हटेपछि त्यहाँ लडाकु समूहहरु भंग भैसकेका थिए र उनीहरुले आफ्नो हतियार सरकारलाई सुम्पिएका थिए। तर हतियारको भण्डार अझै छ, डा गिउस्तोज बताउँछन्।
‘पञ्जशीरसंग जोडिएका अफगान अधिकारीहरु त्यहाँ हतियार पठाउँदै थिए किनभने उनीहरु राष्ट्रपति करजई र घनीबाट सावधान थिए। तर अन्तमा उनीहरुलाई तालिवानको बारेमा चिन्ता लाग्यो’, उनी भन्छन्।
पञ्जशीर उपत्यकामा तालिवान विरोधी बलको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति ३२ वर्षीय अहमद मसूद हुन्। उनी १९८० र ९० को दशकका सम्मानित विद्रोही नेता अहमद शाह मसूदका छोरा हुन्।
मसूदले दाबी गरेका छन् कि उनका लडाकूहरुलाई अफगान सेना र विशेष बलका सदस्यहरुको सैन्य समर्थन छ। वाशिंगटन पोस्टको एक भर्खरको लेखमा, उनले लेखे, हामी गोला बारुद र हतियारको भण्डार छ, जुन हामीले धैर्यतासंग हाम्रा बुबाहरुको दिनहरुबाट संकलन गरेका छौं। हामीलाई थाहा थियो कि यस्तो समय आउन सक्छ।